Ngwaahịa Logo kacha mma na ịntanetị
Kedu uru uru njirimara bara? Jụọ ụlọ ọrụ dịka Nike ma ị nwere ike ịsị nde kwuru nde - mana eziokwu bụ na, na 1971, Nike kwụrụ $ 35 n'ihi na ha logo. Daysbọchị ndị a, na-aga ọnụego maka ọkachamara logo imewe nwere ike ịbụ n'ebe ọ bụla n'etiti $ 150 na $ 50,000. N'oge na-adịbeghị anya, anyị na onye ahịa anyị mefuru $ 16,000 na njirimara logo naanị ịchọta ya mgbe ha mere Google Image Search maka ụlọ ọrụ ha… ha tufuru ụlọ ọrụ ahụ wee mee asọmpi ịntanetị kama maka $ 250 wee nweta ihe mbụ, pụrụ iche, na njirimara a haziri nke ọma dabara na akara ha niile.
Anyị na-ahụ uru dị na njirimara zuru oke, ntuziaka akara, yana akara ngosi. Nke ahụ nwere ike ịbụ nnukwu ego, mana ụlọ ọrụ ndị tinyegoro ego ahụ ahụla nsonaazụ ha. Mgbe ụfọdụ ị nweghị ike imeli nke ahụ, agbanyeghị, anyị ghọtara! Y’oburu na ichoro njiri mara, n’eziokwu, enwere otutu ihe di egwu n’ebe ahu.
Nke a bụ ihe ntinye aha njirimara 50 achọtara na ntanetị, site na mmụọ nsọ ruo na onyinye, na asọmpi na ịbata igwe, na blọọgụ na saịtị akụkọ ihe mere eme. Kporie!
N'anya a video nke a mmebe n'ezie na-eke a logo na Adobe Illustrator.
Etu esi emepụta akara ngosi zuru oke
Chọpụta ihe ọ ga - ewe iji mepụta akara ngosi zuru oke na atụmatụ iri a dị mkpa iji maatụ Naanị Creative, gbakwunyere njirimara imewe ihe ngosi! Kporie.
Akara ahụ kwesịrị ịdị mfe.
Akara ahụ kwesịrị ịdị enweghi mgbe.
Akara ahụ kwesịrị ịdị okike.
Akara ahụ kwesịrị ịdị nke ogugu.
Akara ahụ kwesịrị ịdị ngbanwe.
Akara ahụ kwesịrị ịdị anabata.
Akara ahụ kwesịrị ịdị pụrụ iche.
Akara ahụ kwesịrị ịdị dị mkpa.
Akara ahụ kwesịrị ịdị onye maara ihe.
Akara ahụ kwesịrị ịdị ọkachamara.
Oge ụfọdụ ị mara ihe ị chọrọ, mana ị nweghị ikike were akwa ihe nhicha gị na akara ngosi ọkachamara.
Ndiegwu - Bulite eserese (eserese na ekwentị gị, faịlụ PowerPoint, ma ọ bụ eserese na agba) na anyị ga-atụgharị ya na nnukwu logo n’ime awa ole na ole.
Chepụta Akara nke Gị
DesignEvo bụ ihe online logo onye na-enyere gị aka ịmepụta ihe pụrụ iche na ọkachamara logos maka free. Ha na-enye ihe karịrị otu nde akara ngosi iji chọọ site na, ọtụtụ narị ederede ederede na ụdị ịhọrọ site na ngwa nrụzi dị ike iji hazie akara ngosi gị.
Malite Iwube Akara Gị
Mwakpo Akara Design Design resources:
Ebe nrụọrụ igwe mmadu nwere netwọk nkesa nke ndị na-ese ihe osise nwere ike ịnye akara. A na-enye onye mmeri ahụ ego ahụ. (Akwa n'ihi na ị… bụghị mgbe niile dị ukwuu n'ihi na ndị na-emepụta!)
Ndị na-eme mkpọtụ - igwe gbara site na $ 200.
DesignContest - bido asọmpi nke gị site na $ 100.
DesignCrowd - Mkpa a Logo Design? Ntughari aka na Nhazi Gị Online Ugbu a!
Nkọwa Dijital - biputere ọnụahịa gị na ihe ndị ị chọrọ na ọgbakọ ndị a.
eYeka - crowdsourced n'asọmpi ebe ị na-akpọ aha gị onwe gị ọnụahịa (upscale ịnye ọnụahịa na nwa anụmanụ).
48hoursLogo - nhazi nhazi site na $ 89
Asọmpi Eserese - asọmpi site na $ 1,000
Ihe osise - logo aghụghọ na ndebiri
Ngbaghara - asọmpi site na $ 100
LogoMyWay - asọmpi site na $ 200.
LogoTournament - Nweta akara ngosi ịchọrọ site na ịhọrọ site na 50-200 + omenala aghụghọ site na $ 275.
99designs - atụmatụ aghụghọ sitere na $ 211
MycroBurst - igwe gbara site na $ 149
NJO OZI - Hazie gị imewe zoo
Ndabere - asọmpi malite na $ 250
Lolọ ọrụ Logo ọkachamara:
Genlọ ọrụ na-enye ọrụ njirimara na-ekwenyekarị na ọrụ ha pụrụ iche ma rụọ ọrụ iji kwekọọ na njirimara gị na akara ngosi gị.
Oké ọnụ ahịa Logo Design - nchịkọta si $ 45.
BusinessLogo.net - nchịkọta si $ 99.
BXC - mbido ụlọ ọrụ, rịọ maka ọnụego.
Ndị nchekwa ụlọ ọrụ - ndụmọdụ n'efu, ọrụ nhazi nke malitere na $ 75 kwa elekere
Njedebe Logo Design - aghụghọ site na $ 89
Ndekọ - ngwugwu nhazi ọkachamara site na $ 99
LogoBee - aghụghọ site na $ 199
Akara ụlọ ọrụ - logo aghụghọ si $ 395
Otu Ndị Akara Akara - nchịkọta si $ 149
Akara International Design Agency - ịkpọtụrụ maka ruturu
Akara Logo - nchịkọta si $ 99.
LogoMagic.com - nchịkọta malite na $ 269.
LogoNerds.com - nchịkọta malite na $ 27.
Ndekọ ndekọ - nchịkọta malite na $ 250.
Osisi - site na HP, atụmatụ si $ 299.
Ndị NetMen - imewe malite na $ 149.
Vistaprint - akara ngosi emere na akpaghị aka na-amalite n'efu tinye n'ọrụ ha.
Saịtị n'ike mmụọ nsọ saịtị:
Ikekwe ị ga-achọ ịnwa ịmepụta akara nke gị ma ọ bụ chọta ụfọdụ ndị na-akpali mmụọ ka ha zoo aka! Lee ụfọdụ ezigbo ebe nrụọrụ akụ maka logos.
Blog-omotives - site na ọkachamara ọkachamara Jeff Fisher
Okike - saịtị sitere na Envato
Akara Mara Aha - weebụsaịtị wepụtara iji wetara gị ụfọdụ ozi kacha mma, nyocha, na ozi metụtara ụlọ ọrụ njiri mara logo.
Akara Logobird - Logobird bu ihe eji eme ihe na London na ihe nlere.
Logo Company - Omenala Logo Designs… na-aghụghọ ruo ọhụrụ elu.
Akara Bliss - logo imewe n'ike mmụọ nsọ na gallery saịtị.
LogoPond - Logopond gosiputara ihe kacha mma na njirimara njirimara site na weebụ. Akara nka site na mmepe niile na mpaghara ụwa na-agakarị saịtị a.
Akara Blog - Akara Blog a raara nye ịbụ ihe ntanetị nke ntanetị maka imepụta njirimara.
Blog Ngosipụta Akara - Akara Okike Blog bụ blog lekwasịrị anya kpamkpam na akara ngosi, njirimara na njirimara njirimara.
Akara site na Nrọ Nrọ - blọọgụ na ntinye ntinye kwa ọnwa na onye mmeri kwa ọnwa.
Akara Logolog - Logolog bụ blọọgụ gbasara njiri mara logo.
Ogwe ezumike - akụkọ na ọnọdụ na logos.
Mgbasa ozi Bistro - saịtị onyinye akara ngosi kwa afọ.
Akara m maka DK New Media
Afọ ndị gara aga, onye mmebe m hụrụ akara m ma ọ gara n’ihu na-ajụ m ma ọ ga-amasị m ka emelitere ya. Anọgidere m na-ekwu mba na mgbe ahụ ọ nyere m ụdị ya…
Ọ bụ ihe atụ dị egwu nke ihe pụrụ iche na echefu echefu (n'echiche m). Onye na-ese ihe mere ọtụtụ ihe:
Ọ webatara ma d na k (ụdị)
Ọ na - eji akụ wee gosipụta ike m iji nyere ndị ahịa aka itolite.
Ọ na-eji akụkụ ndị na-enweghị atụ n'akụkụ ọ bụla nke logo ahụ iji gosipụta na anaghị m eme ihe.
Ezie na m mgbe n'ezie jụrụ ya maka redesign, M ozugbo dara na ịhụnanya na otú ọ na-anọchi anya m onwe ika. M na-emezigharị kaadị, ihe ịrịba ama m, na weebụsaịtị m n'echi ya!
Zụrụ Vector Logo faịlụ iji chepụta nke gị
Anyị hụrụ ndị na-akwado anyị n'anya Depositphotos® na ha nwere tọn logos ị nwere ike ịzụta faịlụ vektọ maka. Hụ ihe dị gị nso? Zụta ya, budata ya ma hazie ya ka ọ bụrụ nke gị!
Lọ ahịa maka Vector Ugbu a!
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọta na post a.
Ihe ndi ozo na ihe omuma
Etu esi chepụta akara ngosi pụrụ iche na agaghị echefu echefu
Tags: aghụghọ logo di egwukasị mma logo imewe ụlọ ọrụkacha mma online logo imewekacha mma online logo imewe ọrụzụta logozụta logoọnụ ala logo imewe onlineọnụ ala logos onlineimepụta igwe mmadụ maka imeweigwe mmaducrowdsource logo imewelogosoursourcedcrowdsourced logo imewecrowdsourcing logo imewelogos igwe mmadụnkwụnye egochepụta akaraimewe logoasọmpi imewedesignevointernet logo imewenaanị ihe okikendepụta nke saịtị logologoobi ụtọ logoblọgụ logologo imewe ụlọ ọrụ reviewslogo logo designihe ngosi logologo n'ike mmụọ nsọlogo saịtịnyocha logologo vectorLogoloungelogopondlogosechiche logo ahịamgbasa ozi bistroebe ịzụta logo
Douglas - Daalụ maka itinye anyị na ndepụta gị.
FYI anyị ka bidola ọhụụ ọhụụ mara mma nke 'ngwakọ ngwakọ' ebe ndị ahịa nwere ike ịkpọ oku ma kwụọ ndị ọkaibe aha ha ka ha doo onwe ha n'okpuru asọmpi egwuregwu - lee mbipụta akụkọ anyị taa. http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
Isi ihe bụ na nke a pụtara na ndị na-emepụta ga-akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ n'agbanyeghị agbanyeghị nhọrọ ha ahọpụtara. Igwe mmadụ ekwesịghị ịnwe mmeri ma ọ bụ, dị ka i si kwuo ya, “ọ dịghị mma maka ndị na-emepụta ihe”! Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịme mkparịta ụka nke onwe m ma ọ bụ na-agba ọsọ ọrụ ọmụmụ ihe site na DesignCrowd biko banye na kọntaktị site na http://twitter.com/designcrowd ???
Ọzọkwa, lee ihe njirimara imepụta logo na weebụsaịtị anyị.
Jun 7, 2010 na 9:28 AM
Mgbe m na-aja gị ike Google “logo imewe”, M na-ahụ dum proliferation na ememe nke ọnụ ala logo imewe distasteful. Saịtị ị na-nyere nanị na-enye sleek na-achọ akara ngosi (dị ka "aha gị ebe a"), na-enweghị usoro echiche bụla.
Pushing crowdsourcing logo saịtị - mgbe ikenye Atụmatụ na n'ịhụ na ị nwetara "mbụ" logo - bụ na-achị ọchị ma ọ bụrụ na ọ bụ ntakịrị nleghara anya.
Are ziri ezi na otu isi: ị nweta ihe ị na-akwụ. Agbanyeghị, olile anya m maka ndị na - agụ akwụkwọ gị ga - abụ na ha ga - eme obere mbọ ọfụma tupu ịnye akara ngosi ha dịka akụkụ nke asọmpi imewe.
Isi, onye nduzi okike
Jun 7, 2010 na 11:07 AM
Ekele maka nzaghachi (n'ezie) na m na-aghọta na mie ala branding ụlọ ọrụ nọ n'okpuru iji gosi na ha bara uru. Enweghị m obi abụọ banyere uru gị bara - ahụla m ụlọ ọrụ dịka Kristian Andersen na-ewere ụlọ ọrụ site na ihe ọ bụla ruo ọtụtụ narị nde dollar - ụfọdụ n'ime ya ji ụgwọ mmata aha ha.
A na-awakpo Logo design - n'adịghị ka ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ n'oge a. Anyị nwere folks dị ka Chris Anderson na-eti mkpu “Free!”. Saịtị nnabata vidiyo enweghị ike ịsọ mpi na YouTube, ụlọ ọrụ nchịkọta na-agba mgba na Google, yana sistemụ CMS dị ka Squarespace na-asọmpi na WordPress.
M nwere ike iguzo na-arụ ụka "Ọ dịghị Spec", ma m na onwe ji ụfọdụ n'ime ọrụ ndị a na enwetatụbeghị ezigbo mma nsonaazụ na ha. Enweghị ihe ịzobe n’eziokwu ahụ bụ na dịka ị na-achọghị ha, ha na-ewu ewu na ewu ewu. Maka ụlọ ọrụ na - enweghị ego na enweghị ike ị nweta akara ngosi ọkachamara, gịnị ma ị ga - aga maka ọnụ ala dị ọnụ ala, nke mara mma? Ha gaara eme n'enweghị ihe ọ bụla.
Ọ ga-amasị m ka ị mee post na ihe kpatara ị ga - eji zere ụfọdụ / ọtụtụ n'ime ọrụ ndị a!
GeniusRocket (www.geniusrocket.com), nke onye bụbu onye na-ahụ maka AOL exec Mark Walsh na onye isi ya bụ Peter LaMotte, nwere ikike ịwakpo klaasị ụwa maka akara ngosi na mkpa okike ndị ọzọ.
Nov 2, 2010 na 4:25 AM
Daalụ maka ịkekọrịta ndepụta ahụ!
Anyị malitere saịtị saịtị ịdebanye aha ọhụụ: http://www.logoarena.com
Ọkt 10, 2011 na 6:10 AM
Biko wepu marvellogodesign na listi gị n’ihi na ọ bụ RAgha. Lee http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 andhttp: //www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/
Ọkt 10, 2011 na 8:16 AM
Daalụ, Michaël! Ewepuwo m ha na ndepụta ma gbakwunye Creattica.
Nov 30, 2011 na 3:43 PM
Kpachara Anya maka Designdị Okike Akike. Anọ ha na-ewe afọ ịza. Ọkachamara na ọkachamara.
Jul 3, 2012 na 11: 54 AM
Emechara m jiri akara ngosi http://www.logotypers.com Ha sere m ma gbanwee ya ka ọ bụrụ akara ngosi ọkachamara maka naanị $ 10 (mana ị ga-ebugo eserese, ma ọ bụ ppt ma ọ bụ ihe ga-eduzi ha)
Lee echiche dị egwu! M tinye Ndebanye aha na ngalaba ya. Daalụ!
Mee 21, 2013 na 6: 04 AM
All ego nke logo imewe nkekọrịta bụ ndị bara uru, pụtara imewe na okike ngosi. Nnukwu ihe ndị nke gị na-akọrọ. Enwere ekele dị ukwuu ma nwee obi ekele maka òkè a hụrụ n'anya.
Mee 13, 2015 na 3: 26 PM
Ahụrụ m ndepụta a n'anya. Ọ bụ eziokwu na ị na-enye ọtụtụ nhọrọ maka ndị mmadụ na njikọ ya, emeela nke ọma… nke a bụ onye na - echekwa!
Mee 13, 2015 na 8: 21 PM
Daalụ nke ukwuu Gabriella!
Ọkt 17, 2015 na 1:34 AM
Mee 30, 2016 na 3: 12 AM
omg, nke ahụ bụ nnukwu
Mee 30, 2016 na 3: 14 AM
nnukwu njikọ, tnx
Angelo Anderson na -bụ mmadu
Jun 28, 2016 na 9:25 AM
A logo bụ mirror oyiyi nke ika gị. Ntụziaka gị nke ịmepụta akara bụ ihe na-adọrọ mmasị.
Ee, akara ngosi nke Nike jiri $ 35 na mbido mana ugbu a ọ bara uru karịa $ 600,000. Naanị ịmepụta ezigbo akara ngosi enweghị ike inyere gị aka ịkwalite azụmahịa gị. Ọrụ gị na ngwaahịa gị ga-egosipụtakwa ike nke njirimara gị.
Ọkt 4, 2017 na 6:02 AM
M na-achọ Logo Design echiche maka ịme ihe ngosi pụrụ iche wee chọta ọkwa gị. Daalụ maka post a. O nwere ụfọdụ ezigbo echiche itinye n'ọrụ m ohuru.
Daalụ maka ndụmọdụ gị bara uru
Dee 20, 2019 na 9: 16 AM
A magburu onwe post banyere logo imewe. Enwetara m ọtụtụ mmụọ maka ọkwa ọhụrụ. Daalụ ton maka nke a Doug, nwee obi ụtọ xmas!
Jenụwarị 7, 2020 na 4:08 PM
Daalụ nke ukwuu maka ọmarịcha okwu Sally! Enwere m olileanya na ị nwere ezumike dị egwu.
Mee 16, 2021 na 12: 19 PM
Jun 29, 2021 na 9:49 AM
Lofọdụ Logo Design Resources Bụ nke ekwe nkwa na-akpali